Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa oo si weyn loogu soo dhoweeyey Kismaayo+Sawiro – SBC
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa oo si weyn loogu soo dhoweeyey Kismaayo+Sawiro
Posted by Webmaster on March 26, 2013 Comments
Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Hobyo.
Eng. Cabdiraxmaan Yariisow oo loo Magacaabay G/Gobolka Banaadir.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, waxaana wafdiga garoonka ku soo dhoweeyey saraakiisha maamulka kumeelgaarka ah ee Kismaayo iyo xubnihii horay u sii joogay magaalada ee isugu jiray Wasiirada, xidlhibaanada iyo saraakiisha.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa markii uu soo degay waxa uu salaan ka qaatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda isaga oo sidoo kalena gacan qaaday qaar ka mid ah dadweynihii soo dhoweynayay oo ay ku jiraan ardayd, iyo haween.
Ra’iisal Wasaaraha iyo xubnaha Wasiirada ah ee safarkiisa ku wehlilya ayaa kulan ballaaran la qaatay saraakiisha maamulka magaalada Kismaayo waxaana hogaaminayay Axmed Maxamed (Madoobe).
Ra’iisal Wasaare Saacid oo markii uu soo gabagaboobay kulankan la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku farxeen soo dhoweynta reer Kismaayo, isaga oo u mahadceliyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM sidii ay isaga kaashadeen sugida amniga.
“Runtii waxaa ii muuqatay in dadku ay doonayaan dowladooda, raalina ka yihiin, waana uga mahadcelineynaa sida diiran ee ay noo soo dhoweeyeen” ayuu yiri R.wasaaraha oo xusay in booqashadan ay qeyb ka tahay booqashooyin uu ku kala bixinayay gobolada dalka.
“Reer Kismaayo waxay safka hore kaga jiraan dadka jecel dowladnimada” ayuu mar kale yiri Ra’iisal Wasaaraha.
“Aadbaan ugu faraxsanahay imaatinka wafdiga Ra’iisal Wasaaraha waana soo dhoweyneynaa isaga iyo madaxda kale ee sharafta leh ee la socota, waxaana leenahay ku soo dhowaada Kismaayo” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Ra’iisal Wasaaraha iyo wafdiga ayaa inta ay joogaan magaalada Kismaayo waxay kulamo is daba joog ah la qaadan doonaan maamulka magaalada, iyo qeybaha kale ee bulshada Kismaayo.